China, July 29, 2021 China, July 29, 2021 Douglas Karr
Kuvhara kutengesa inguva huru. Ndipo apo iwe paunogona kupemberera rese basa iro raenda mukumisikidza mutengi mutsva. Ndipo pakaunzwa zvinoedzwa nevanhu vako vese uye yako CRM neMarTech maturusi. Iyo pop-iyo-champagne uye inofema kugomera kwekuzorora kwenguva. Ichowo chingori kutanga. Mberi-kufunga zvikwata zvekushambadzira zvinotora nzira inoenderera yekugadzirisa rwendo rwevatengi. Asi mabhenefiti pakati pezvishandiso zvechinyakare anogona kusiya
Kana iwe wanga uri muverengi webhusaiti yangu kwenguva yakareba, iwe unoziva manakiro andinoita pamusoro pemhando dzakasiyana dzemakadhi ebhizinesi. Ndakave nemakadhi epamberi-ayo, makadhi akaenzana, makadhi esimbi, makadhi akaomeswa… ndinoafarira zvakanyanya. Ehe, nekuvharirwa uye kusakwanisa kufamba, pakanga pasina yakawanda yekudikanwa kwemakadhi ebhizinesi. Zvino iko kufamba kuri kuvhurika, zvakadaro, ndakafunga kuti yaive nguva yekuvandudza kadhi rangu uye uwane
Kana zvasvika pakukura kwebhizinesi, kushandiswa kwetekiniki hakudzivisike! Kubva kuna amai vadiki uye zvitoro zvepop kuenda kumakambani makuru, hazvirambike kuti kuisa mari mu tech kunobhadhara zvakanyanya uye kuti varidzi vazhinji vebhizinesi havazive huremu hwekudyara mu tech inotakura. Asi kugara pamusoro pekufambira mberi tekinoroji uye software harisi basa riri nyore. Sarudzo dzakawanda kwazvo, sarudzo zhinji… Kuisa mari mune chaiyo kutumira software kushambadziro rako kwakakosha uye
Sales Outreach: Matanhatu Matanho Anokunda Mwoyo (Uye Mamwe Matipi!)
Chipiri, May 18, 2021 Chipiri, May 18, 2021 David Wachs
Kunyora tsamba dzebhizinesi ipfungwa inodzokera kumashure. Panguva idzodzo, tsamba dzekutengesa dzepanyama dzaive tsika yaida kutsiva vashambadzi vepasuo nesuo nematangi avo. Nguva dzemazuva ano dzinoda nzira dzemazuva ano (chingotarisa shanduko pakuratidzira kushambadza) uye kunyora tsamba dzekutengesa bhizinesi hazvisi izvo. Mimwe mirawo yakajairika maererano nechimiro uye zvinhu zveyakanaka tsamba yekutengesa ichiri kushanda. Izvo zvakati, chimiro uye urefu hwetsamba yako yebhizinesi zvinoenderana